Kooxda Liverpool oo ku guuleystay koobka UEFA Super Cup kaddib markii ay rigooreyaal kaga adkaatay Chelsea… + SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Liverpool oo ku guuleystay koobka UEFA Super Cup kaddib markii ay rigooreyaal kaga adkaatay Chelsea… + SAWIRRO
Haaruun August 14, 2019
(Istanbul) 14 Agoosto 2019. Kooxda Liverpool ayaa ku guuleystay koobka UEFA Super Cup markeedii afaraad kaddib markii ay rigooreyaal ku garaaceen Chelsea kulankii caawa ka dhacay Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Kooxda Chelsea ayaa goolka la horreysay waxaana u dhaliyey 36’daqiiqo qeybtii hore ee ciyaarta Olivier Giroud.
Xiddiga ku guuleystay koobkii adduunka ee 2018 lagu qabtay dalka Ruushka ee Giroud ayaa si wacan u dhammaystiran kubbad uu caawinteeda lahaa Christian Pulisic, kaddib markii laacibka reer Mareykan uu afar xiddig ee Liverpool ah baas ka dhex diibay kulanka ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay Blues.
Olivier Giroud ayaa dhaliyey 12 gool 16 kulan oo uu tartammada Yurub u ciyaaray Chelsea, marka la barbardhigo kaliya 7 gool oo uu dhaliyey 49 kulan oo kulamada maxaliga ah kooxda Blues.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay 48’daqiiqo waxaa ciyaarta garbo siman ku soo celiyey Sadio Mane, kaddib markii xiddiga xulka qaranka Senegal uu dhammaystiran kubbad uu ka helay Firimino isagoo ku jira xerada ganaaxa ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay barbaro 1-1.
Sadio Mané ayaa noqday caawa ciyaaryahanii ugu horreeyey ee Afrikaan ah oo gool dhaliya tartanka UEFA Super Cup tan iyo Frederic Kanoute oo ka dhaliyey kulan dhexmaray kooxaha Sevilla iyo Barcelona sanadkii 2006-kii.
Kulanka ayaana ku soo dhammaaday 90-ka daqiiqo ku soo dhammaaday barbaro 1-1, waxaana loo baahday in labada kooxood lagu kala saaro 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Waxaana intii lagu guda jiray 30-kii daqiiqo ee lagu kordhiyey ciyaarta 95’daqiiqo waxaa markale shabaqa soo taabtay Sadio Mane, kaddib markii uu shabaqa dhigay kubbad uu ka helay Roberto Firmino, Reds ayaana kulanka ku hoggaamisay 2-1.
Laakiin daqiiqado yar kaddib Chelsea ayaa ka soo laabtay goolkaas oo barbaro ka dhigtay ciyaarta, waxaana 101’daqiiqo ciyaarta ka dhigay 2-2 ciyaaryahan Jorginho kaddib markii uu gool u rogay rigoore lagu galay Tammy Abraham, ciyaarta ayaana ku soo dhammaaday guud ahaan barbaro 2-2 oo ay labada kooxood isla dhaafi waayeen.
Waxaa loo baahday in labada kooxood markale lagu kala saaro gool ku laadyo waxaana rigooreyaal 5-4 ku adkaatay kooxda Liverpool.
Markii xiddigaha labada dhinac ay rigooreyaasha wada dhaliyeen waxaa middii ugu dambeysay laga qabay weeraryahanka Chelsea ee Tammy Abraham.
Kooxda Liverpool ayaana sidaas ku qaaday koobka UEFA Super Cup markeedii afaraad oo kala ah 1977, 2001, 2005 iyo 2019.
Waxayna ahayd markii ugu horreysay oo garsooreyaal Dumar ah ay dhex-dhexaadiyaan kulan final Yurub ah.
QISO: Kubadda cagta oo sanadkan 2019 weysay halyeeyo cajiib ah, sida Xavi, Van Persie, Čech iyo magacyo kale
Halyeeyga Man United ee Gary Neville oo war naxdin leh u sheegay taageerayaasha kooxda Liverpool